फर्साटिकर युवा क्लब सेमिफाइनलमा – Khel Dainik
फर्साटिकर युवा क्लब सेमिफाइनलमा
मंसिर २८, २०७७ | (PostaComment)
बुटवल (खेलदैनिक) । प्रतियोगिताको दावेदार मध्ये एक मानिएको फर्साटिकर युवा क्लब रुपन्देहीमा जारी तेस्रो रानीगञ्ज कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
आइतबार भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा फर्साटिकरले टिकुलीगढ युवा क्लबलाई २–१ ले हराउँदै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्यो । बुटवल–१७ रानीगञ्ज स्थित भूपू सैनिक खेलमैदानमा भएको खेलको १०औं मिनटमा रामगोपाल कहरले फर्साटिकरका लागि पहिलो गोल गरेका थिए ।
कहरले मैदानको दाँया भागबाट टिकाराज गुरुङले मिलाइदिएको क्रस पासमा बक्स नजिकैबाट सटिक गोल गरे । त्यस्तै दोस्रो गोल भने २४औं मिनटमा बिसु थापाले गरे । थापाले बक्स बाहिरबाट गरेको कडा प्रहार बिपक्षी गोलरक्षकले जोगाउने प्रयास गरे तापनि गोलमा परिणत भएको थियो ।
उता पराजित टिकुलीगढका लागि ५४औं मिनटमा सनम गुरुङले एक मात्र सान्त्वना गोल फर्काए । आइतबारको खेलमा टिकुलीगढका गोलकर्ता सनम गुरुङ नै म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत मंसिर २९ गते सोमबारको खेल आयोजक रानीगञ्ज युवा क्लब (ए) र न्यु ईरा एफसीबीच हुने खेल संयोजक आशिष मगरले जानकारी दिए ।
रानीगञ्ज युवा क्लब, बुटवल–१७ को आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित नगद ४० हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले २० हजार प्राप्त गर्ने आयोजक क्लबका अध्यक्ष धन बहादुर ठकुरीले बताए । त्यस्तै विधागततर्फ पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।
प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने पौष ४ गतेका दिन हुनेछ ।
← नेपालको तयारी शुरु, अष्ट्रेलिया र जोर्डन बलियो प्रतिद्वन्द्वी आयोजक सौभाग्य सेमिफाइनलमा प्रवेश →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर २८, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर २८, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर २८, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर २८, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर २८, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर २८, २०७७